No. 2086, Saturday, March 16, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2086, Saturday, March 16, 2019
No. 2086, Saturday, March 16, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၁ ရက် (စနေ၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၉)
မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ လူ ၆,၀၀၀ ကျော်အမှိုက်ကောက်
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်းပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ဦးဆောင်၍ လူ ၆,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ကာ အမှိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၇ ရက်နံနက်က ပြုလုပ်သည့် အဆိုပါအမှိုက် ကောက်ပွဲတွင် အစိုးရဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေ တနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ခုနစ်မြို့ နယ်ရှိပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင် ခဲ့သည်။
အင်းတော်ကြီးဒေသရှိ တောင်သူ ၆၀ ကျော်ကို အော်ဂဲနစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များပေးအပ်
အင်းတော်ကြီး ဇီဝအ၀န်းနယ်မြေတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနေ သည့် သဘာဝစပါးစိုက်ခင်းများ မှ စပါးစိုက်တောင်သူ ၅၈ ဦးနှင့် ဥယျာဉ်ခြံစိုက်တောင်သူ ၁၀ ဦး ကို အော်ဂဲနစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိ ရစ္ဆာန်နှင့် အပင်များအဖွဲ့ (FFI) က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရန်ကုန်သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ရေအသုံးပြုခွင့် ဧပြီ ၁၃ ရက် နောက်ဆုံးလျှောက်ထားရမည်
ကော်မတီပိုင်ရေပိုက် လိုင်း၊ အင်းလျားနှင့် ကန်တော် ကြီးမှ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ရေအသုံး ပြုခွင့်ကို ဧပြီ ၁၃ ရက်နောက်ဆုံး လျှောက်ထားရန် ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီကကြေညာသည်။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များအနေဖြင့် အဆိုပါနေရာမှ ရေကိုကစားမည်ဆိုပါက ယာယီအသုံးပြုခွင့် စိစစ်ခွင့်ပြုမည်ဟု မတ်လ ၁၅ရက် တွင် ကြေညာသည်။
စည်းကမ်းမဲ့လုပ်နေသည့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တားမြစ်ရန် မြန်မာ-တရုတ်စီးပွားရေးအသင်း ဖွဲ့စည်းမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စည်း ကမ်းမဲ့ လုပ်ဆောင်နေသည့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ရန် တရုတ် သံရုံး၏ တောင်းဆိုချက်အရ မြန်မာ-တရုတ် စီးပွားရေးအသင်း ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန် သည် စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံ တည်ငြိမ်မှုကို အဓိကမထားဘဲ ရန်စပွားအောင် လုပ်ပေးချင်သည့် စိတ်ဓာတ်များ ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့အ စည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြော ကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းရပ် ဆိုင်းရေး ရှင်းလင်းစွာမပြောသည့်အပေါ် စိုးရိမ် မိကြောင်း မြစ်ဆုံဒေသခံအချို့က ပြောသည်။
NCA မထိုးရသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရှစ်ဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် အစိုးရဖိတ်ကြား
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲ ရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) မထိုးရသေးသည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အစိုးရက ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်တွင် မန်ယူ-ဘာစီလိုနာ၊ စပါး- မန်စီးတီးတွေ့ဆုံ
ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင် နယ်ပွဲစဉ် တွဲဆိုင်းများ မဲနှိုက်ရွေး ချယ်ရာတွင် မန်ယူက စပိန်မှ ဘာ စီလိုနာနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ ကွာတားဖိုင်နယ်သို့အင်္ဂလန် အသင်းလေးသင်း တက်ရောက်ခဲ့ ပြီးနောက် စပါးနှင့်မန်စီးတီးတို့ အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ် သည်။ လီဗာပူးက ပေါ်တိုနှင့်ကစား ရမည်ဖြစ်ကာ အေဂျက်ဇ်က ဂျူဗင်တပ်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ် သည်။ ယင်းနှစ်သင်းသည် ၁၉၇၃ နှင့် ၁၉၉၆ ဗိုလ်လုပွဲများတွင်တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး အေဂျက်ဇ်က ၁၉၇၃ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ကာ ဂျူဗင်တပ်က ၁၉၉၆ တွင် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။
ယူရိုခြေစစ်ပွဲ စပိန်အသင်းလူစာရင်းမှ အစ္စကိုချန်လှပ်ခံရ
စပိန်ကွင်းလယ်လူ အစ္စကိုသည် ရီးရဲလ်နည်းပြဆို လာရီလက်ထက်တွင် ပုံမှန်မက စားခဲ့ရခြင်းကြောင့် ပေးဆပ်ခဲ့ရ ပြီး စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်း လူ စာရင်းမှ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။ မတ်လ ၁၅ ရက်က စပိန် နည်းပြ လူးဝစ်အင်းနရစ်ကြေညာ သော လူစာရင်းတွင် ကိုကီ၊ ဆောလ်နှင့် သီယာဂိုအယ်လ်ကန် ကာရာတို့လည်း မပါဝင်ခဲ့ပေ။
အိန္ဒိယတွင် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာ ကနူးကယက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ မြန်မာပြိုင်မည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာ ကနူးက ယက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာ လှေလှော်အဖွဲ့ချုပ်မှ ကစား သမားနှစ်ဦး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးအသင်း ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲယှဉ်ပြိုင်မည်
အိုလံပစ် ဒုတိယအဆင့် ခြေစစ်ပွဲအကြို ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းနှင့် ဗီယက်နမ် အမျိုးသမီးအသင်းတို့ ခြေစမ်းပွဲ နှစ်ပွဲယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် မီဒီယာဒါရိုက် တာဦးဇော်မင်းထိုက်က ပြော သည်။
ဇွဲကပင်ဘုရားတိုးချဲ့ရင်ပြင်သို့ ပညာရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တက်ခွင့်မပြုရန် အစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြား
ဇွဲကပင်တောင် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က ဦးစီးလုပ် ဆောင်နေသည့် တိုးချဲ့ရင်ပြင်ပေါ် သို့ ပညာရှင်အဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရသေးသဖြင့် ဘုရားဖူးပြည်သူများကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုရန် ပြည်နယ်အစိုးရက ဂေါပကအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားထားသည်။
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီး တရုတ်က အဆောက်အအုံဆောက်ရန်ပြင်ဆင်မှု မြန်မာကန့်ကွက်
မြန်မာနှင့်တရုတ် နှစ် နိုင်ငံအငြင်းပွားနေသော မူဆယ် မြို့နယ်စပ်ပြဿနာအပြီးသတ် ဖြေရှင်းမပြီးသေးမီ တရုတ်နိုင်ငံ က နယ်စပ်ဂိတ်တိုးချဲ့မည်ဆို ကာ အဆောက်အအုံ ဆောက် လုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေ၍ မူဆယ် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများ က တားမြစ်ခဲ့သည်။
ခြေဥကို အနှစ်သာရရှိစွာမပြင်ဘဲ စကားနိုင်လုနေပါကအကျိုးမဲ့လုပ်ရပ်များလုပ်နေကြောင်း ပြည်သူသတ်မှတ်လိမ့်မည်ဟု လွှတ်တော်အမတ် သတိပေး
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက် ရာတွင် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန် အလှန်စကားနိုင်လုထိုးနှက်ပြီး အ ကျိုးမရှိသည့် ရလဒ်ထွက်ပေါ်စေ ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အနှစ်သာရရှိ သည့် ပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်ရန်လိုအပ် ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင် သီဟက လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေး သည်။
AAC တည်ထောင်သူကို ထိုင်းတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်လေးလနှင့် ငွေဒဏ်ချမှတ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးခံ ထားရသော မြန်မာလုပ်သားများ အရေးကူညီနေသည့် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့တည်ထောင်သူ ကိုရဲမင်းကို စမွတ်ပါကန်တရားရုံးက ယမန်နေ့တွင် ထောင်ဒဏ်လေးလချမှတ်ခဲ့သည်။
ဝံသာနုစိတ်ဓာတ် ကဗျာသင်ကြားခြင်းမပြုရန် ပယ်ဖျက်ခြင်းအပေါ် မဘသအဖွဲ့ ကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်
စတုတ္ထတန်း ကျောင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ပါဝင်သည့် ဝံသာနုစိတ်ဓာတ်ကဗျာကို ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက သင်ကြားခြင်း မပြုရန် ပယ်ဖျက်ခြင်းအပေါ် အမျိုးဘာသာနှင့် သာသနာကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (မဘသ) အဖွဲ့ (အထက်မြန်မာပြည်)က ကန့်ကွက်စာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယူရိုပါလိဂ်ဖလားရနိုင်ခြေရှိသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမိဟု အာဆင်နယ်နည်းပြပြောကြား
ပြင်သစ်ကလပ်ရန်း နက်စ်ကို နှစ်ကျော့ပေါင်း ၄-၃ ဂိုး ဖြင့် အနိုင်ရကာ ယူရိုပါလိဂ်ဖလား ကွာတားဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ်နှင့် အတူ ပထမဆုံးဆုဖလားရနိုင်ခြေ ရှိ၍ စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်း နည်းပြ အမ်မရီက ပြောသည်။
ရခိုင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့မှု ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိ၍ ထည့်သွင်းခံရသူအချို့မကျေနပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိသဖြင့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သူ မြောက်ဦးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဦးလှစော ကပြောသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိ ယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးသာအောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူမည့် အထက်ပါ ကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က မတ်လ ၁၄ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုစိုက်ထူထားသည့် လွိုင်ကော်ရှိ ပန်းခြံတွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထား
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ကန့် ကွက်ကြောင်း လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၌ မတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် ကချင်နှင့် ကရင်နီလူငယ်များက စီစဉ်နေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စနှင့် တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးဆိုင် ရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid Hotel ၌ မတ်လ ၁၇ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီ အထိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြု လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။
မြ၀တီ - မဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖွင့်ပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်မည်
မြန်မာ - ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လွယ်ကူစေရေးမြ၀တီ - မဲဆောက်အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်း နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန် အိုချာတို့မတ်လ ၁၉ ရက်တွင် တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
ဝက်စ်ဟမ်းကို ရင်ဆိုင်မည့် ဟက်ဒါဖီးလ်တွင် ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝသော ကစားသမား ၁၅ ဦးသာရှိ
ယနေ့ည ၉ နာရီခွဲတွင် ဝက်စ်ဟမ်းအိမ်ကွင်းသို့ သွား ရောက်ရင်ဆိုင်ရမည့် ဟက်ဒါ ဖီးလ်အသင်း၌ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝ သော ကစားသမား ၁၅ ဦးသာရှိ ပြီး ကြီးမားသော ဒဏ်ရာပြဿနာ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဟက် ဒါဖီးလ်နည်းပြ ဂျန်ဆီဝတ်က ညည်းတွားသည်။
မန်ယူနှင့်ပွဲ အဖြစ်အပျက်အတွက် အာဆင်နယ်အသင်းကို အက်ဖ်အေစွဲချက်တင်
အိမ်ကွင်းတွင် မန်ယူကို ၂-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရသော ပရီးမီး ယားလိဂ်ပွဲစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ကွင်းအတွင်းသို့ ပရိသတ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ် သက်၍ အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ် (အက်ဖ်အေ) က အာဆင် နယ်ကို စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။
. ချန်ပီယံလိဂ်နောက်ဆုံး (၁၆)သင်းအဆင့်တွင် မန်စီးတီးကို ၇-၀ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း ရှော်လ်ကေးက နည်းပြဒိုမီနီကိုတီဒက်စကို အား ထုတ်ပယ်ပြီး ယနေ့လိုက်ပ်ဇစ်နှင့်ပွဲကို နည်းပြဟောင်း ဟုဘ်စတီ ဗန်နှင့် ကွင်းလယ်လူဟောင်း မိုက်စ်ဘူစကန်တို့ ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ် သည်။
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် ပင်နီအင်္ကျီဝတ်ဆင်မှုကို ဟန့်တားပေးရန် ကော်မရှင်သို့ အကြောင်းကြား
မြို့နယ်စည်ပင်ရွေး ကောက်ပွဲဝင်မည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်က ပင်နီအင်္ကျီ ၀တ်ဆင်မှုနှင့် မဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ် တွင် အနီရောင်အသုံးပြုမှု၊ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပုံများ အ သုံးပြုမှုရှိသောကြောင့် ဟန့်တား ပေးပါရန် NLD ပါတီမှ စည်ပင် ကော်မတီဝင်လောင်းက စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အ ကြောင်းကြားသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ပါ မွေးသက္ကရာဇ်ထက် သုံးနှစ်ကျော် တာဝန်ပိုထမ်းဆောင်သည့်ဆရာမကို လစာငွေပြန်လျော်ခိုင်း
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်ပါ မွေးသက္က ရာဇ်ထက် သုံးနှစ်ကျော် တာဝန်ပိုထမ်းဆောင်သည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အထက(၁၂) ချမ်း အေးသာစံမှ အလယ်တန်းပြ ဆရာမကို လစာငွေ ကျပ် ၇၈ သိန်းကျော် ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကာယကံရှင်ထံ မတ်လ ၈ ရက်စွဲဖြင့် စာပို့အကြောင်းကြား ထားသည်။
အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့၏ အညာမိသွားသော သူခိုးများ
ပီတာဘရူးဂဟဲလ်၏ ဂန္ထဝင်လက်ရာ ပန်းချီကားတစ် ချပ်ကို အတင့်ရဲရဲခိုးယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့က စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိပေ။
Tesla ကုမ္ပဏီက ၂၀၂၀ တွင် ထွက်မည့် Model Y လျှပ်စစ်ကားအသစ်ကို မိတ်ဆက်
Tesla ကုမ္ပဏီက ၎င်းတို့၏ များစွာမျှော်လင့်ထားသော Model Y လျှပ်စစ်ကားအသစ်တစ်စီးကို မိတ်ဆက်ပြီး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အယ်လ်လွန်မာ့စ်က ယင်းကားများ ၂၀၂၀ ဆောင်းဦးရာသီတွင် ထွက်ရှိမည် ဟု ပြောသည်။
အသံတိတ် နှိပ်စက်နေသော တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောပင်များ
ကချင်ပြည်နယ်ထဲ ၀င်ရောက် စိုက်ပျိုးလာသည့် တရုတ်တစ်သျှူး ငှက်ပျောပင်သည် လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်ခန့်က စတင်ပြီး ၀ိုင်းမော် မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတွေမှာ စိုက်ပျိုးလာကြသည်ကို တွေ့ရ သည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အ များဆုံး လာရောက်စိုက်ပျိုး ရင်း နှီးမြှုပ်နှံသည့်
လူကုန်ကူးမှုနဲ့ မိသားစုဘဝ ဒရာမာဇာတ်ကားမှာ သတင်းထောက်အဖြစ်တွေ့ရမယ့် နေတိုး
Box.No 88 ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် သတင်းထောက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်း နေတိုးက ပြောသည်။ လူကုန်ကူးမှုနှင့်မိသားစုဘဝ အကြောင်း ဦးစားပေးရိုက်ကူးမည့် ဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ အောင်ပန်းနှင့် ဘန်ကောက်တွင် ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် Vogue မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ပထမဆုံး တောင်ကိုရီးယားမျက်နှာဖုံးရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ဘေဒူးနာ
သရုပ်ဆောင်ဘေဒူးနာ သည် အမေရိကန် Vogue မဂ္ဂ ဇင်းမျက်နှာဖုံး၌ ဖော်ပြခံရသော ပထမဆုံးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သူဖြစ်လာသည်။
No. 2156, Monday, June 17, 2019
No. 2155, Sunday, June 16, 2019
No. 2153, Friday, June 14, 2019
No. 2152, Thursday, June 13, 2019
No. 2151, Tuesday, June 11, 2019
No. 2150, Monday, June 10, 2019
No. 2148, Saturday, June 8, 2019